Eli gcisa linika ezi logo kwi-3D ezimile ngeebhaluni | Izidalwa ezikwi-Intanethi
IiLogo ezaziwayo zenziwa ngokungathi ziibhaluni
Ngaphambi koko Amaza amagagasi ezihlala kwiiwebhusayithi ezibaluleke kakhulu ezinje ngeBehance, iDribbble kunye nabanye abambalwa, isidingo sokufumana umbono oza kubonakala kuwo wonke amanye kubaluleke kakhulu ukuze sikwazi ukwenza ipotifoliyo ethi ithathele ingqalelo iinkampani ezizayo eziqeshayo okanye ezisebenzisa kujonge imizobo emitsha okanye abayili abaza kulandela.
Ngaba oku kukhangelwe Iprojekthi ebizwa ngokuba yi "Blow UP" kwaye oko kukwi-Behance ukuze ufumane enye yeelogo eziyilwe ngulo mdali kwaye unendawo ekhethekileyo yokubabonisa njengeebhaluni zomoya ezishushu ezinokudada ziye kuthi shwaka esibhakabhakeni. Inye kuphela into yokuba zenziwe kwi-3D kwaye ziyinxalenye yepotifoliyo yomyili waseBrazil.
UVinicius, ligama elo njengoko ikhutshwa kwiVimeo, ngumculi ocebe le ndlela ikhethekileyo yokubonisa iilogo ezithandwayo ezinje ngeAdidas, iApple, iDolce kunye neGabanna, iNike okanye iMercedes phakathi kwezinye ezininzi.
Isindululo sokuyila esinomdla, ukuba akukho nto ingaphaya izama ukunika enye imbono malunga neelogo zeempawu ezinjalo ezidumileyo kwaye sihlala sisetyenziswa kuzo kwiifom zazo zakudala.
UVinicius upapashe nevidiyo apho ibonisa uphuhliso nomsebenzi owenziweyo ngeenkqubo ezithile zoyilo, ngaphandle kweliphi iphepha lobuqu ngokwalo apho unokubona lonke olu luhlu lunomdla kakhulu kwiimpawu zeempawu ezaziwayo.
Ndikucebisa ukuba upase yevidiyo yakhe kwiVimeokanye ukufunda ngenkqubo yokuyila kunye kunjani ukukrola nganye yeelogo. Ukusuka apha Unofikelelo ku-Behance ukuze ukwazi ukumlandela kwaye ke wazi wonke umsebenzi wakhe. Umsebenzi olungileyo wokumodareyitha apho ufumana ngakumbi umbono kunye nomxholo.
Ukuba ujonga ngakumbi malunga nelogo, ndincoma oku kungena kwibhlog yethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » IiLogo ezaziwayo zenziwa ngokungathi ziibhaluni
Imizobo enemibala enamabinzana kwaye igcwele indalo yokukukhuthaza ngomhla wakho
Kutheni abaYili kufuneka banqamle ukusukela kwixesha lokukhula